स्वास्थ्य – हाम्रो देश
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्मी बढेपछि सचेत हुन आग्रह गरेको छ । गर्मी मौसममा तातो हावा ‘लु’ ले स्वास्थ्यमा जोखिम पुर्याउन सक्ने भएकाले सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले आग्रह गरेका छन् । यो मौसममा चल्ने तातो…
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको निमन्त्रणामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) का महानिर्देशक डा टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस आज नेपाल आउँदैछन् । उनले वैशाख ८ देखि १० गतेसम्म नेपालको भ्रमण गर्ने छन् । महानिर्देशकका साथ डब्ल्युएचओको दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय…
काठमाठौं : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयस नेपाल आउने भएका छन् । स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलका अनुसार गेहब्रेयससहितको टोली वैशाख ८ गते नेपाल आइपुग्नेछ । उनी ३ दिने सद्भाव भ्रमणका लागि नेपाल आउने भएका हुन्…
कतिपय मानिसहरुको सौख दाह्री पाल्ने । कतिले यसलाई फेसनको रुपमा पनि लिने गर्छन् । जहाँ १८ देखि ७६ वर्ष उमेर समुहका दाह्री पालेका मानिसहरुमाथि अध्ययन गरिएको थियो । हुन त दाह्री पाल्दा केही फोहोरी देखिन्छ भन्ने टिप्पणीहरु पनि हुने गर्छन्…
क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ रायोको सागले , यस्ता छन् अन्य अचम्मका फाइदाहरु
काठमाडौं । अहिले रायोको सिजन हो । साग खान मन पराउने सबैको भान्सामा यो पाकेको हुन्छ । पकाउन सजिलो, सजिलै उपलब्ध र स्वादिलो हुने भएकाले रायो अधिकांशको रोजाइमा पर्छ । साग स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । कतिपय मानिसले खानामा अनिवार्य साग चाहिन्छ ।…
२२ फाल्गुन २०७८
स्वस्थ रहनका लागि नियमित जुस पिउने गर्नुपर्छ । जुस पिउँदा शरीरले ताजा अनुभव गर्छ अनि आवश्यक सबै तत्त्व पनि उपलब्ध गराउँछ । यहाँ हामी उखुको रसका फाइदाको चर्चा गर्नेछौं , स्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार, जन्डिस लाग्दा उखुको रस पिउनुपर्छ । यसले शरीरलाई…
धनगढी । सुदूरपश्चिममा थप तीन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका अनुसार ७५३ जनाको एन्टिजेन र ५६ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा थप तीन जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । प्रदेशमा २ सय १४ जना सक्रिय संक्रमित…
शनिबार ३५० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ४ को मृत्यु
काठमाण्डु- नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३५० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ७ हजार ९६ नमुना परीक्षण गर्दा ३५० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । आज देशभर एक हजार २७२ जना कोरोना…
केजीको ६४ हजार मूल्य पर्ने भेनिलाको खेती यसरी गर्नुहोस्
काठमाडौ । तपाई हामीलाई थाहा छ केही फहरुको मूल्य सुन चाँदीको भन्दापनि महंगो हुन्छ । यति महंगो फलको खेती किन नगर्ने ? गर्मीको मौसम सुरु हुने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा सबैभन्दा पहिले आइसक्रिमको नाम आउँछ। हामी विभिन्न किसिमका आइसक्रिम खाने बारे…
ओमिक्रोन अन्तिम भेरिएन्ट नभएको डब्ल्युएचओको भनाई
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) ले कोभिड–१९ को ओमिक्रोन नै अन्तिम भेरियन्ट नभएको भन्दै सचेत रहन विश्वजगतलाई आग्रह गरेको छ । डब्लूएचओको कोभिड–१९ प्राविधिक विभागका प्रमुख मारिका वेन्ले केरकोभले ओमिक्रोनका ४ फरक–फरक भेरियन्ट पत्ता लागेको भन्दै यो भेरियन्ट कोभिडको…